China 5 in 1 Type-C HUB,HDMI,USB3.0,TYPE-C PD100w mpanamboatra sy mpamatsy |Wellink
Type-C/Vehivavy, Type-C PD100w
4K/HDMI, USB 3.0*3, Type-C/F, Type-C PD100w miditra
volafotsy, mena, volondavenona habakabaka, manga maizina, volamena raozy
Habe USB-C 5-in-1 & fanitarana faobe: Ity adaptatera multiport type c ity miaraka amin'ny seranana famoahana horonan-tsary HDMI 1 * 30HZ izay mamindra ny haino aman-jery ao anatin'ny segondra misy fiantraikany 3D, 1 * 100W USB-C fanaterana herinaratra, seranana 3 * USB 3.0 ho an'ny famindrana angon-drakitra ambony.Chosure USB C hub no safidy tsara indrindra amin'ny fifandraisan-davitra hanitarana ny efijery Macbook-nao.
Fanaraha-maso ny maripana faran'izay ambany & Chip tsy miankina: Vita amin'ny akora firaka aluminium mateza ary chip marani-tsaina natsangana miaraka amin'ny fiasa fanalefahana hafanana tsara indrindra;Ny mari-pana ambony indrindra amin'ity toby fiantsonan'ny USB C ity dia 118.4 ihany℉eo ambany fiasan'ny entana feno;Ny chip iray tsy miankina dia mifehy ny seranana iray, manohana ny fiasan'ny seranana rehetra tsy misy fahatarana sy fanelingelenana ary misoroka ny onjam-peo, overvoltage, circuit fohy ary hafanana avo ho an'ny fiarovana.
Thunderbolt 3 mankany HDMI Dongle: Advanced 30Hz HDMI Teknolojia, fitaratra na manitatra ny efijery amin'ny alàlan'ny seranan-tsarimihetsika 30HZ HDMI mba handefasana mivantana horonantsary 3840 x 2160 mankany amin'ny HDTV, monitor na projector.Afaka mankafy malefaka kokoa, loko, feo ary antsipiriany kokoa noho ny seranan-tsambo 30HZ ianao.Ary manohana ambany noho ny 4K * 2K@60HZ fanapahan-kevitra.
Fandefasana angona mahery vaika: Ny interface USB 3.0 telo dia fehezin'ny chips avo lenta, ity karazana-c splitter ity dia afaka mampiditra kapila mafy telo miaraka amin'ny fifindran'ny angona azo antoka sy haingana tsy misy fanapahana.Hafainganam-pandeha hatramin'ny 5Gbps, mifanaraka amin'ny USB 3.0 2.0 toy ny USB deive, flash drive, adapter wi-fi, totozy, fitendry ary fitaovana hafa haingam-pandeha.
Portable & Garantie: Atsofohy ary milalao, 2.33oz monja, mirindra tsara miaraka amin'ny haben'ny paosy mora apetraka ao amin'ny tanany, kitapo na paosy.Ny orinasanay dia manome antoka fiverenana tsy misy fepetra 30 andro & fiantohana 18 volana & fanohanana vokatra mandritra ny androm-piainana & Serivisy mpanjifa namana.Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay amin'ny fotoana rehetra.
Inona ny mari-pana amin'ny hub rehefa mandeha ny seranana rehetra?Mahamay ve?
Valiny: 100 eo ho eo izany℉rehefa afaka 4 ora fiasana dia mafana kely fa azo ekena
azoko ampiasaina ve ny port usb3.0 hanefa ny samsung s8?
Tsara ve ny bandwidth ampiasaina amin'ny oculus rift, izay mila 3 usb 3s sy hdmi?
Valiny: Miala tsiny fa tsy ampiasaina amin'ny oculus rift ny hub.
Mifanohitra amin'ny filazalazana ny tranokala, nanoratra ny mpandinika iray fa tsy mahazaka 4k 60hz ity hub ity.misy afaka manamarina ve?
Valiny: Miankina izany.Tsy maintsy manamarina ny mombamomba ny solosainao ianao.Ny mac-ko dia nampiseho 60Hz, fa ny solosaina finday dell dia nampiseho 30Hz, noho izany dia tsy maintsy manohana ny fampisehoana usbc 60Hz ny solosaina.
Avy amin'ny mdai tamin'ny 14 Janoary 2021
afaka mampiasa port pd ve aho handefasana adate, sa charging fotsiny?
Valiny: Ny seranan-tsambo pd ihany no ampiasaina amin'ny fiampangana
Nisy nampiditra kapila mafy roa ve?haingana ve?
Valiny: Haingana izany
Miasa amin'ny telefaona ve ity hub ity?
Valiny: Eny, raha karazana port c ny findainao
Mandeha ve izany raha tsy misy famatsiana herinaratra ivelany?
Valiny: Eny tsy mila famatsiana herinaratra ivelany izany.
Hiara-miasa amin'ny samsung s9 ve izy io raha manafatra sary?
Valiny: Eny, ny fanapahan-kevitra ambany 4K dia tohanana
azo ampiasaina amin'ny port thunderbolt 2 ve io?
Valiny: Tsia, hafa ny seranan-tsambo
teo aloha: Type-C 15w Wireless HUB (12 in 1)
Manaraka: 5 in 1 Type-C HUB, HDMI, USB3.0, Type-C PD 100w, RJ45